Kaamirada wax lagu qoro ee laga helo naqshadeynta garaafka ee ay tahay inaad ogaato | Abuurista khadka tooska ah
Adduun weynaha fanka wey ku badan yihiin hibooyin aan inta badan si sax ah loo aqoonsan, Waxay ku qabtaan waxyaabo daanka ka daadinaya si dhib yar ama u heellan.
Markay dunidu aqoonsato fanaaniintan hibada leh, badiyaa waxay kujiraan dulqaadka dulqaadkiisa ama sariirta dhinaceeda, laakiin tani maahan kiiska dadka wax qora, maxaa yeelay astaamahani waa farshaxanno heer sare ah oo awood u leh inay ku ciyaaraan qaababka, istaroogyada, midabada iyo waxyaalaha isbarbar dhiga hab aan noociisa oo kale ahayn, taasi waa sababta meeshan aan wax yar uga xusi doonno adduunkan cajiibka ah iyo waxaad rabto inaad matasho.
1 Waa maxay naqshadeynta naqshadeynta garaafka?
2 Door intee le'eg ayuu sameeya sawir qaade?
Waa maxay naqshadeynta naqshadeynta garaafka?
Si laga bilaabo, calligraphy in ka badan farshaxanka waxaa loo tixgeliyaa fikradWaxay u egtahay in midkeen kastaaba nafteena ku matalay qoraalkeena.
Caqiidadani waxay ka kooban tahay barashada waraaqaha iyo qorista, qaabka iyo farsamada loo sameeyay iyo meelaha sagxadda laga sameeyay. Iyadoo aan si cad loo ogaan asalka, waxaa la xaqiijiyay in bini aadamka uu ku dhashay rabitaankiisa raadinta oo had iyo jeer ku soo kordha taariikhda.
Aaladaha aan u adeegsano qorida waxay u xuubsiibteen inay noqdaan sida ay maanta yihiin waana iyadoo aan laga fikirin, waxaan ilaalinay dhaqanka ah adeegsiga qodobo gaar ah oo tilmaamaya dhaqankeena ama qaabkeena.
Laakiin waqti ka dib, habka loo adeegsado aaladaha wax lagu qoro waxay noqdeen wax ka badan oo kaliya shaqeynaya, ama haddii si kale loo dhigo, maanta waxaad ka heli kartaa tusaalooyin aan dhammaad lahayn oo ah gacmeed gacmeed ama kumbuyuutar kumbuyuutar qurxoon.
Tiknoolajiyadda ayaa abuurtay qaab qorista oo aan raadineynin wax ka badan inuu dejiyo qaab qoraal ah oo xarfaha ah, tan waxaa si fudud loogu jahwareersan yahay naqshadeynta.
Foomamka, muujinta iyo dhammaan walxaha ku jira qoraal si aad u wanaagsan ayaa loo qeexay maanta waana tan qaylodhaan waa waxa ku xeeran, laakiin in ka badan qoraalladu waa weriye-yaqaan.
Door intee le'eg ayuu sameeya sawir qaade?
Calligrapher-ka badanaa wuxuu qabtaa dhammaan dhinacyada qoraalka, waad soo koobi kartaa oo waxaad ku soo qaadan kartaa qaab is waafajinaya ama waxaad isticmaali kartaa qaababka si aad xarfaha u geliso.
Laga yaabee in badan oo fikraduhu u muuqdaan kuwo wareersan laakiin adduunkan ayaa jira saddex dhinac oo leh deegaan shaqadooda u gaar ah iyo in ay si dhaw isugu dhawyihiin midba midka kale laakiin iyada oo aan loo sinnayn, kuwan ayaa ah naqshadeynta, xuruufta iyo qaab qorista.
Si kooban loo dhigo, Waraaqaha waa isbeddel cusub taasi waa tan ugu badan aduunka xarfaha, waxay hirgeliyaan waxyaabo dheeri ah oo lagu qurxiyo xarfaha, qorista ma ahan wax halkan aad ugu badan laakiin hal-abuurnimo ka duwan, tani wax yar ayey ka fogtahay xarfaha lafteeda, sidaa darteed Guud ahaan, qorista qumman looma baahna .
Calligraphy halkii, haa wuxuu doonayaa inuu muujiyo istaroog kasta samaynta xarfaha kaligood istaahila, xeerarka naxwaha u kala khuseeya.
Hadda, qaab qorista sida aan kor ku soo sheegnay waa nidaam la soo saaray sababo la xiriira dhalashada kumbuyuutarrada bulshada dhexdeeda. Kuwani waa kuwa dejiya qawaaniinta si xarfaha loogu istcimaali karo tusaalayaal iyadoon kuwani ku xad-gudbin waqtiga la isticmaalayo laakiin aan lumin bilicdooda.
Anagoo og kala duwanaanshahan, waxaan u hibeyn karnaa goob yar fanaaniinta ugu caansan farshaxanka cajiibka ah ee naqshadeynta, waxay u istaageen shaqadooda qiirada leh iyo dhiirigalinta waana in la dhaho intabadan waxay u heellan yihiin iskood madaxbanaan iyo waxbarid, laakiin aan waligiis ka tagin farshaxankiisa, ka dhex muuqda dadka waaweyn ee wax qora Ricardo Rousselot, Ivan Castro, Martina Flor, Keith Adams, Jessica Hische, Johan Quirós, Rob Draper, Seb Lester, Julien Breton, El Seed, Mr. Zé, Glen Weisgerber, Oriol Miró, Marian Bantjes, kuwa kale…
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » Khayraadka » Fuentes » Khariidadaha wax lagu qoro waxaa laga dhex helay nashqadeynta garaafka waana inaad ogaataa
Naif qaab ciyaareedka cajiibka ah ee carruurta ee midabkiisu ka buuxo
Mawduucyada ugu fiican ee loogu talagalay Chrome